Nolol La Xasuusto – Qeybtii 8aad – Siciid Maxamed Gees | Saxil News Network
Nolol La Xasuusto – Qeybtii 8aad – Siciid Maxamed Gees
Hargaysa (Saxilnews.com)-Markii waxbarashadii ii dhammaatay sanadkii 1964, ayaan la kulmay arday Reer Baraawe ah, Iikaar Baana Xaddaad oo isna waxbarashadii dhammaystay oo dalkii u socda. Waxa aannu isku raacnay inaan markan dhulka iyo badda marno oo aannu sii dal baranno. Waxa aannu tareen iyo dooni u raacnay dalka Faransiiska iyo magalada Baaris (Paris). Waqtigaas ma jirin tareenka badda hoostiisa mara ee Iglan iyo Faraans isku xidhaa, doonyo ayaa dadka iyo baaburtaba mootin jiray. Magaaladii Baris (Paris) waxa aan ka goosanay tigid ilaa Talyaniga ah iyo magaaladda xeebta ah ee Jinawa (Genoa). Halkaas oo markab dalxiiska ah oo dhawr kun oo rakaab ah qaadda aanu ka racaai lahayn. Waxa dhacday in gabadhi tigidhada tareenka jaraysay ay na af garan wayday oo noo geysay tigadho tareen tegaya Jineefa (Geneva) oo dalka Iswisterland (Switzerland) ku taalla. Meel dhexe markuu tareenkii nala marayey ayaa nala saxay oo dib naloo soo saaray mid Jinawa (Genoa) iyo meeshii aan ku soconay u socda. Waqtigaas waxa Genoa ku yaallay sagaal dekedood oo midkood la yidhaahdo Somalia.